Shinoa Fantatra momba ny orinasa Screw sy mpamatsy | Tanso
Amin'izao fotoana izao, ny fitaovana skoto efa mahazatra any Chine dia 45 vy, 40Cr, vy vy ammoniated, 38CrMoAl, fihenan'ny hafanana avo, sns.
1) Tsipika vy dia mora vidy ary manana fiasa tsara, fa ny fanoherana, ny fanoherana ny korosi ary ny fanoherana ny fahanterana.
Fitsaboana hafanana: Novahana sy tezitra hb220-270, fantsom-panafody avo hrc45-48.
2) Ny fiasan'ny 40Cr dia tsara kokoa noho ny vy 45, fa matetika dia mila vovoka miaraka amin'ny takelaka krômium izy io hanatsarana ny fahaizany manakana sy mitafy fanoherana. Saingy ny fepetra takiana amin'ny plating krôma dia avo kokoa, ny takelaka vita amin'ny hoditra dia tena manify ary mora hitafy, matevina be dia mora mianjera, saingy rehefa mianjera kosa dia manafaingana ny tara, izay tsy dia zatra intsony.
Fitsaboana hafanana: heredy hb220-270, mafy krôma mafy HRC> 55
3) Ny vy nitranitra sy ny 38CrMoAl dia manana fiasa feno be dia be ary ampiasaina be. Amin'ny ankapobeny, ny raviding nitriding dia 0.4-0.6mm. Saingy ity karazana tahirin-kevitra ity dia afaka manohitra ny hangezan'ny hidrogen klorida amin'ny fahaizana ambany sy ny vidiny avo.
4) tsara ny angon-drakitra superalloy mihoatra ny angon-drakitra hafa. Tsy mila fantsakana ny angon-drakitra. Ny ankamaroan'izy ireo dia ampiasaina amin'ny milina fametahana milina halogen-maimaim-poana. Ny angon-drakitra dia manana anti-oxidation avo, anti-corrosion sy anti-aging, ary hafanana hra55`60.
Ny kiraro fantsom-pifidianana dia miasa amin'ny alàlan'ny hafanana avo, tsindry avo, metaly mekanika avo ary tontolo iainana avo mandritra ny fotoana maharitra. Ny singa vitsivitsy voalohany dia takian'ny fepetra amin'ny fizotrany ary tsy azo ihodivirana ny fatiantoka noho ny ady. Amin'ny ankapobeny, ny sakamalaho dia nitombo-nitrandraka hanatsarana ny hamafin'ny tarehy, izany hoe hanatsarana ny fanoherana hitafy. Na izany aza, raha atao ambanin-javatra ny antony mahatonga ny akanjo, raha toa ka tsy mihena araka izay tratra ny akanjom-pasika dia ho nihena be ny fivezivezena ny androm-piainana.
Ity manaraka ity dia manazava ny antony mahatonga ny skoty sy ny fomba hampihenana ny fitafy
1. Ny plastika tsirairay dia manana refes amin'ny mari-pana azo atao amin'ny fametrahana plastika. Ny hafanana amin'ny fanodinana barika dia tokony hifehezana azy ho akaiky ny mari-pana mari-pana. Ny plastika misy ny plastika dia miditra amin'ny barika famahanana avy amin'ny hopper, ary ho tonga eo amin'ny faritra famahanana, izay tsy maintsy anehoana famoretana maina. Rehefa tsy misy hafanana ireo plastika ireo ary tsy mihetsika ny fihenan-tsakafo, dia mora ny mamorona rindrina anatiny ao anaty barika sy ny akanjo ivelany misy ny sakana. Toy izany koa, ao amin'ny fizarana fanetanana sy ny faritra homogenizing, raha miovaova ny toetran'ny fantsom-bolo, dia hamolavola koa izy io.
2. Tokony havaozina tsara ny hafainganana. Satria ny plastika sasany dia ampiana miaraka amin'ny fanamafisana, toy ny fiberglass, mineraly na famenoana hafa. Ny fahatapahan'ireo akora ireo amin'ireo akora metaly dia matetika lehibe lavitra noho ny plastika vita amin'ny molotra. Amin'ny tsindrona amin'ireto plastika ireto, raha ampiasaina ny haingam-pandeha avo lenta, ny fanatsarana ny angon-jiro eny amin'ny plastika dia hanatanjaka koa ireo fibre miforitra kokoa. Ny fibra lotra dia misy sisiny maranitra ary manao fanampian'ny mahery vaika. Rehefa mineraly tsy mandeha amin'ny laoniny ny mineraly tsy an'oliva, dia kely loatra ny vokatr'izy ireo. Noho izany, tsy tokony ahitsy ny haingam-pandeha.